Khudaarta Curry Wok | Cunnooyinka jikada
Khudaarta la shiilay
Waxaan rabay a wok maxaa yeelay waxay umuuqataa hab fiican oo wax loo cuno khudaartaWay fududahay in la diyaariyo waxaanan leenahay saxan macaan. Hagaag, usbuucii la soo dhaafay waxay i siiyeen mid ay weheliyaan dhowr fijaan, jibbaaro, iwm, aad u dhameystiran!. Aniguna ma sugi karo inaan wax sii daayo isla markiiba waxaan aaday jikada si aan ugu diyaariyo cuntada aan maanta kuu keenayo, Khudaarta curry wok.
Darajada adag: Easy Waqtiga diyaarinta: 30 daqiiqo (ama ka yar, waxay kuxirantahay xirfadaada mindi) Waxyaabaha ay ka kooban tahay 3-4 qof:
warbaahinta aan tayo lahayn
Paprika xoog leh (ikhtiyaari)
Elaboration: Aynu bilowno diyaarinta suugada: Kuleylka digsiga qaado qaado oo saliid saytuun ah iyo kala badh basal jarjar laba jibbaaran. Markuu diyaar yahay ku dar biyo (qadarku wuxuu ku xirnaan doonaa inta suugo ee aad rabto inaad ka tagto), sug inta ay kareyso oo ku dar 3-4 qaado oo curry ah, cusbo dhadhamin, basbaas iyo, haddii aad rabto, paprika xoog leh. Qaddarka dambe wuxuu ku xirnaan doonaa adiga iyo dhadhankaaga dhir udgoon.
Ka dib mari maraqa oo ay weheliso wax yar oo galley ah mashiinka. Tani waxay u adeegi doontaa inay isku sii dhumiso mana haysano qaybo yar oo basal ah. Dhinac dhig oo khudaarta oo dhan jarjar.
Marka tan la sameeyo, kuleyli xoogaa suugo ah kuleylka ku kari kari khudradda kuleylka badan. Aniga xaalkaygu ma wada haboona inay wada ahaadaan maxaa yeelay way yaryihiin, laakiin haddii taadu ka weyn tahay oo dhammaantood isla wakhtigaas si fiican ayey u habboon yihiin. Marka khudaartu u dhammaato sidaad jeceshahay (xusuusnow in aan lagu karin karin qaboojiyaha) waad u adeegi kartaa waadna ku raaxeysan kartaa.
Waqtiga adeega ... Hadday suurogal tahay, dooro inaad ugu adeegto maddiibadaha oo aad u isticmaasho jaranjarada! Talooyinka cuntada:
Daacad baan ahay, tan mabda 'ahaan waxay doonaysay inay sidoo kale qaadato digaag, laakiin cunnooyinkaas aan ku arkay qaboojiyaha waxaad moodaa in qof kale laga iibsaday markii aan u imid inaan ka helona waa la waayey. Waana mahadsanid wanaag, maxaa yeelay wuxuu uga tagi lahaa qofkaas kale wixii uu u baahnaa ...
Waad isticmaali kartaa isla saldhigga khudradda laakiin waxaad ku isticmaali kartaa suugooyin kale. Mid aad u xiiso badan ayaa noqon kara Maraqa Gombao, oo lagu sameeyay maraqa soyka. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa maaddooyin badan sida prawns, dibiga in strips ama, mid ka mid ah xulashooyinka aan ugu jeclahay, bamboo y boqoshaada Shiinaha. Ugu fiican… Sidii aan horey u sheegnay, muhiim maahan in khudaarta in badan la sameeyo, aan dhahno baraaruga waxay gaarayaan kala bar cayriin, marka waxay ka kooban yihiin nafaqooyin ka badan inta aan karkarino.
Waqtiga diyaarinta Daqiiqado 5
Waqtiga karinta Daqiiqado 15
Wadarta waqtiga Daqiiqado 20
Kiilooriyada halkii adeeg 165
Cunnooyinka Shiinaha, Cunnooyinka khudradda
Anigu waxaan ahay farsamo yaqaan waxbarista caruurta, waxaan ku soo dhexjiray dunida qoraalka ilaa iyo 2009 waxaanan noqday hooyo. Waan jeclahay karinta, ... Eeg astaanta>
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Cunnooyinka Aduunka » Cunnooyinka Shiinaha » Khudaarta la shiilay
Waxaan haystaa wok weyn, markaa sifiican ayuu iila jaanqaadaayaa waligay kamaan samayn suugada basasha marka hore, waxaan u samayn doonaa sidan oo kale, waa inay dhadhan fiican yeelataa.
Waad ku mahadsan tahay karinta, waa nooc fiican. :)
Ummu Caaisha dijo
Aad baad ugu mahadsantahay faallooyinkaaga iyo aqrintaada, waxaan jecel nahay inaad ka heshay qashin-qubka. Waad noo sheegi doontaa sidaad tahay; )
Jawaab Ummu Caaisha
Digaag Digaag leh Canarian Adobo
Squid Artistic oo leh Liin dhanaan iyo Toonta Vinaigrette